के होला प्रियंका र आर्यनको ‘बटरफ्लाई’ ? « Ramailo छ
के होला प्रियंका र आर्यनको ‘बटरफ्लाई’ ?
’के म तिम्रो होइन र’ डेव्यु नायक आयर्न अधिकारी झण्डै दुई वर्ष पछि दर्शकमाझ आउँदैछन् । सिक्सप्याक अभिनेता आर्यन अभिनित ‘बटरफ्लाई’ पुष २८ गतेदेखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ । आयनले यो फिल्ममा चल्तीकी नायिका प्रियंका कार्कीसँग रोमान्स गरेका छन् । कस्तो होला त आर्यन र प्रियंकाको ‘बटरफ्लाई’ ?
फिल्मले गर्ने व्यापार र पाउने प्रतिक्रिया रिलिज पछि नै थाहा हुनेछ । तर अर्जुन पोखरेलद्वारा संगीतवद्ध ‘बटरफ्लाई’ को रोमामन्टिक गीतले भने दर्शक तथा श्रोताको मन जितिरहेको छ । म गाउँदिन अब गीत गजल को भिडियो पनि निकै आकर्षक बनेको छ । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई युट्युवमा हालसम्म साढे एघार लाख बढीले हेरेका छन् भने प्रतिक्रिया उत्कृष्ट मिलेको छ । सुगम पोखरेल र अञ्जु पन्तको स्वर सुमधुर छ । भिडियो हेर्नुस् :
ओमप्रतिक गुरुङ निर्देशत फिल्मलाई सुरेश बज्राचार्यले खिचेका हुन् । रमेश प्रजापती कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा निर्माताको रुपमा पुष्पाञ्जली अधिकारी, रामशरण राना र भुपेन्द्र सुवेदी छन् । मन्दिल श्रेष्ठ र सरोज शाह सह निर्माता हुन् । फिल्ममा आर्यन र प्रियंकासँगै अर्पण थापा, रविन्द्र खड्का, पुरन थापा, सुष्मा कार्की लिड रोलमा छन् । फिल्ममा अर्जुन जिसी र मन्दिल श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ ।